Barnaamij taaba galay oo uu hal abuuray IBRAAHIM SULDAAN CABDIRAXMAAN – Murtimaal
Barnaamij taaba galay oo uu hal abuuray IBRAAHIM SULDAAN CABDIRAXMAAN
Barnaamij taaba galay oo uu hal buuray Ibraahim Suldaan Cabdiraxan oo ah wiil uu dhalay suldaan ka mid ah suldaanada Somalilandaasasay waxanu ka soo jeeda gobol ka Gabiley oo hurmuud u ah gobolada kale Ibraahim aya lacag gaadhaysa 10000 kun dollar imika uGu deeqay gudidayada abaaraha isagoo sidan adeegsanaya,
Barnaamijkaa taabagallay, wan taageeray !
Waxaan aqbalay Xujaddii #Ibrahim Suldan Cabdiraxmaan iyo magacaabista iiga timi #Xuseen Badhaani ee loogu adeegayay dadka abaaruhu saameeyeen. Waxaan ballan qaadayaa inaan bixin doono #0.5 doolar #COMMENT kasta iyo #0.2 doolar #LIKE kasta oo aad samaysaan.
XUJADANI waxay socon doontaa 24 saacadood. Lacagta ay noqotay, waxaanan u diri doonaa Gudida abaaraha ee Qaranka Somaliland. Cadaynta aan ku bixiyay lacagta na waxaan idinkula soo wadaagi doona bartayda facebooka 48 saacadood gudahood.
Ugu danbaynta, waxaan dooran doonaa 5 qof oo idinka mid ah, si ay u sii wadan XUJADAN oo ay ula wadaagaan asaxaabtooda kale ee facebooka. U jeedadu waa inaan caawino dadkeena dhibaataysan.
Kubarinaye Allahayow naga bixi abaaraha!
Sideed u aragtaam
Previous Post:Daawo showgii yaabka lahaa ee fanaanada Yurub Geenyo Ay Muqdisho ku qabatay iyo Marwada Madaxwaynaha Somaliya oo live u dawanaysa
Next Post:Daawo fanaanada Hani uk oo mucjiso la soo baxday iyo dharki ciidanka Somaliya oo ay xidhatay